How to connect - Vakok Online Game : WoTLK, Aion
Who Trade What?
Owner ID Reset
Play more at Vakok!
Welcome To Vakok Online Games!
Welcome to Vakok Online Games. Vakok is the most successful Massive Multiplyer Online Game Server and Hosted local private game server such as World of Warcraft : Walth of the Linch King patch and World of Warcraft : Catalysm Patch. The most modernize and fashionize MMORPG type game AION has been launched also.
*Ready to Join the Vakok Community?
Join to the VAKOK ONLINE GAMES Join NOW OR How To Connect?
Vakok Member Name: Password: Need Help?
Vakok Server တွင် အခမဲ့ Account ကို ပြုလုပ် ကာ WOW 3.3.5 (WOLTK) ကို ကစားလို့ရပါမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
1) Vakok Account ပြုလုပ်ရန် <www.vakok.net/register>ကိုသွားပါ။
3) သင်ကစားလိုသည့် Game အမျိုးအစားအတွက် Client ရှိဖို့လိုပါမည်။ World of Warcarft (Wrath of the Lich King) ကို အင်းစိန် မြို့ နယ်၊ လမ်းသစ် လမ်း မှ တဆင့် ဇိအုန်ကုန်းလမ်း အတွင်း ရှိ အမှတ် (၇)၊ နံသာမြိုင် (၁) လမ်း၊ နံသာကုန်း ရပ်ကွက် တွင် ရုံးချိန် အတွင်း လာရောက် ကူးယူ နိုင်ပါတယ်။
Download ပြုလုပ် ချင်ရင်တော့ <https://www.fileplanet.com/202681/200000/fileinfo/World-of-Warcraft:-Wrath-of-the-Lich-King-Game-Client> တွင် Download ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
4) WOW Client(Wrath of the Lich King 3.3.5a) ရှိပြီးဖြစ်ပါက သင့် Game File ထဲမှ data -> enUS -> realmlist.wtf File ကို notepad ဖြင့်ဖွင့်ကာ realmlist.wtf ထဲတွင် Set realmlist pandora.vakok.net ဟုပြောင်းပြီး save ပြုလုပ် ပြီး Vakok (WOTLK) ကိုဝင်ရောက် ချိတ်ဆက် ဆော့ကစာ နိုင်ပါပြီ။
09 964 522 945 (24 Hours Customer Service )
Home | Armory | Forum | Point Transfer
What is Vakok